भक्तपुरका मुद्दा प्रदेश सम्म पुञ्याउन काँग्रेसको जित आवश्यक : किरण न्यौपाने - sambahak
Home अन्तरबार्ता भक्तपुरका मुद्दा प्रदेश सम्म पुञ्याउन काँग्रेसको जित आवश्यक : किरण न्यौपाने
नेपाली काँग्रेसका सक्रिय नेता मध्येमा पर्नु हुन्छ किरण न्यौपाने । २०३१ सालमा जन्मनु भएका नेता न्यौपाने २०४७ साल देखि नेविसंघको यात्रा तय गर्दै हाल पार्टी जिल्ला सह सचिव हुनुहुन्छ । साविक झौखेल गाविस वडा नं.४ हाल चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्वर ३ मा जन्मनु भएका न्यौपानेले वडा नेबिसंघको वडा सदस्य ,गाउ समिति,क्षेत्रिय समिति र जिल्ला नेविसंघको अध्यक्ष र केन्द्रिय सदस्य र पार्टीको गाउ वडा समिति,गाउ समिति सचिव, कावा सभापति हुँदै क्षेत्र नम्वर १ को सदस्य,सचिव तथा उपसभापति एवं कार्यवहाक सभापति हुँदै हाल जिल्ला सहसचिव रहनु भएको छ । पेशाले अधिवक्ता रहनु भएका उहाँ जिल्ला बारको निर्वतमान सचिव समेत हुनुहुन्छ ।
पार्टीमा निकै नै सक्रिय रहँदै आउनुभएका उहाँ सँग भक्तपुर क्षेत्र नम्वर १ क मा आगामी मंसिर १४ गते हुने उप निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस तर्फबाट प्रमुख दावादेरका रुपमा रहनुभएका उहाँसँग निर्वाचनको सवालमा संवाहकले गरिएका छोटो कुराकानी यस्तो रहेको छ ।
उप निर्वाचनको महत्व के छ तपाईको विचारमा ?
जनताले आफ्नो अभिमत प्रतिनिधि मार्फत राख्न पाउने संवैधानि एवं नैसर्गिक हकको लागि उपनिर्वाचन को महत्व रहेको छ । गत प्रदेशको निर्वाचनमा यस भक्तपुरको क्षेत्र नं.१ क का निर्वाचित जनप्रतिनिधिको असामयीक निधन पश्चात यस प्रदेश का जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत बिचार र बिकासमा अभिमत राख्न पाएका छैनन तसर्थ यो निर्वाचन महत्व रहेको छ । भक्तपुरका मुद्दा ओझेलमा परेको छ । भक्तपुरबाट काँग्रेसको प्रतिनिधि हुनु अत्यन्तै आवस्यक छ ।
तपाईको दलको उप निर्वाचनको लागि तयारी कस्तो रहेको छ ?
नेपाली काँग्रेस सदैव लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसदीय परंपरा माथि बिश्वास राख्ने भएकाले हामी निर्वाचनका लागि सदैव तयार रहन्छौं । यसैबीच यस क्षेत्रको प्रतिनिधिको निधन पश्चात हामीले आन्तरिक रुपमा निर्वाचनको तयारी गरेका छौं । निर्वाचन आयोगले यो उप निर्वाचन ढिलो गरी घोषणा गरेता पनि हामी आन्तरिक र बाह्रय रुपमा नै तयारीमा छौं । हाम्रा सांगठनिक संचरचना
लाई निर्वाचन प्रति उन्मुख गराएका छौं,सवै तहका साथीहरुलाइ परिचालित गरेका छौं । जनजनमा काँग्रेस,मनमनमा काँग्रेस ,नेपाली काँग्रेस पुर्नजागरण अभियानका रुपमा गत कार्तिक बाट हामीले संगठन परिचालन गरका थियौ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय समितिबाट देश ब्यापी राष्ट्रिय जागरण अभियान प्रारम्भ गरे पश्चात हामी त्यसैमा समाहित भएका छौ । पुर्नजागरण तथा जागरण अभियानमा देखिएको उत्साह,उमंगका कारण हामी पूर्ण तयारीमा छौं ।
काँग्रेसमा तपाईंको पनि योगदान होला नी किन यो निर्वाचनमा उम्मेद्वारी
दाबी गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपाली काँग्रेसका सवालमा हरेक क्रियासिल सदस्य उम्मेद्वारिका लागि योग्य छौं । यसमा मेरो नाम पनि आउनु ठुलो कुरा भने हैन । पार्टीलाई अवको अवस्थामा जिताउनु नै मुख्य कुरा हो । पार्टीका बिभिन्न तहका साथीहरु उम्मेदवारी लागि आन्तरिक रुपमा लाग्नु भएको छ । म पनि लामो समय पार्टी हरेक तह र तप्कामा रही,आन्दोलनका समयमा पार्टीको जिम्मेवारी पुरा गरेका कारण म प्रदेश सभाको अवको निर्वाचनका लागि निर्वीकल्क्प उम्मेदार हु । तर पनि पाटीको ईमान्दार सिपाई भएकाले पार्टीका तर्फकाट मलाई उम्मेदवार बनाएन भने पनि पाटबाट तय हुने उम्मेदार लाई सदैव सहयोग गर्ने नै छु ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले अधिकार पाएनौं भनेर भनी आन्दोलन गरि रहेका छन्
यस्तो अवस्थामा तपाईंको भने यसमै उम्मेद्वारी किन त ?
नेपाल संघीयतामा गएका कारण यस्ता माग उठ्नु स्वभाविकै हो । हामी जस्ता अल्प बिकसीत मुलुक,राजनैतिक र सामाजिक स्तरमा समेत पछि परेको सन्र्दभ मा प्रदेशका सभाषदहरुले अधिकारका कुरा उठाउनु स्वभाविकै हो । तर प्रदेश को अधिकार कति ,सिमा कति हुने भन्ने कुरा जनप्रतिनिधहरुले बुझ्नु पर्दछ । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नै यो संघियता घोषणा भएका कारण संघीय संरचनाका हरेक कार्य प्रति नेपाली काँग्रेस सदैव सचेत रहन्छ,म नेपाली काँग्रेस को कार्यकर्ता भएकाले काँग्रेसका मुद्दा नै मेरो मुद्दा हो,कांग्रेसका हरेक निर्णय मेरा लागि पथप्रर्दशक हुने छ ।
नेकपाले जितेको ठाउँमा,उसले आफ्नो शाख गुमाउन त चाहँदैन
नेकपालाई हराउन नेपाली काँग्रेसले कस्तो रणनीति अपनाउला ?
उस्को त्यो चाहना हुनु अन्यथा होईन । तर नेकपाले के बुझ्नु पर्दछ भने बिगतमा जस्तो ढाटेर,जनतालाई भुलाएर फेरी पनि मत पाउन सकिन्न भनेर । निर्वाचनका लागि केवल नक्कली राष्ट्रवादका कुरा गरेर हुदैन भन्ने कुरा नेकपाले बुझे हुन्छ । उस्ले चाल्ने जुनसुकै रणनितिलाई असफल बनाउन म स्ववं र नेपाली काँग्रेस भक्तपुर हर कदममा तयार छ ।
तपाईं भन्दा बरिष्ठ नेताहरू पनि होलान् नेपाली काँग्रेस भक्तपुरमा तपाइँले नै
चाहिँ उमेद्वारी किन दाबी गर्दै हुनुहुन्छ? फेरि प्रदेश नं ३ बाट कसैलाई टिकट
दियो भने तपाइँको सहयोग कस्तो रहन्छ?
राम्रो कुरा गर्नु भयो । नेपाली काँग्रेस लामो संघर्ष गरेर ,हजारौ नेपाली आमा का सपुतहरुको बलीदानबाट आएको पार्टी हो । हाम्रो पार्टीमा ००७ सालमा आन्दोलनमा लागेका अग्रजहरु देखि ०४६,०६२।०६३ का आन्दोलमा लाग्ने सहयात्री हरु लगायत सयौ र हजारौं साथीहरु हुनुहुन्छ, भक्तपुरमा नै हजारौ साथीहरु हुनुहुन्छ । म अग्रज नेताहरुको सदभाव,आर्सिवाद,समकालिन नेताहरुका सहयोग अनि म भन्दा पछिल्ला पुस्ताको भरोषाको केन्द्र बिन्दु बनेको छु ,मेरो
उम्मेदवारीमा कोहि नेता तथा साथीहरुले गुनासो गर्नु हुन्न,किनकि मैले विगत मा पार्टीका हरेक कार्यमा गरेको ईमान्दारी सहयोग देख्नु भएको छ । पार्टीको सैद्धान्ति,बैचारिक,सांगठनीक कार्यमा मैले पुर्याएको योगदान प्रति उहाहरु जानकार हुनुहन्छ । म पनि लामो समय पार्टीहरेक तह र तप्कामा रही,आन्दोलनका समयमा पार्टीको जिम्मेवारी पुरा गरेका कारण म प्रदेश सभाको
अवको निर्वाचनका लागि निर्वीकल्क्प उम्मेदार हु । तर पनि पाटीको ईमान्दार सिपाई भएकाले पार्टीका तर्फकाट मलाई उम्मेदवार बनाएन भने पनि पार्टीबाट तय हुने उम्मेदार लाई सदैव सहयोग गर्ने नै छु ।
उक्त क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसले नै जित्ने आधार के छन् र ?
बिगतको निर्वाचन अगागि आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी भनि जनतालाई झुट खेती गर्न सफल कम्यूनिष्टहरुको सरकार बनेपछि भएका नितिगत भष्ट्राचार,तस्करी तथा सदैव नेताका अगाडि घुम्ने केही ब्यक्तिहरुको बोलवालाका कारण जनता आजित भएका छन । हाम्रो प्रदेशमा गएको नगरपालिका निर्वाचन पश्चात बनेको स्थानिय सरकारले बढाएको करको दायरा, बिकास निर्माणमा आफ्नो पार्टीका साथीहरुको लागि एउटा मापदण्ड अनि अन्यन्त्र अर्कै मापदण्ड ,निर्णय बाट यस प्रदेशका आम जनताहरु नया भरोषा लाग्ने नेताको खोजिमा हुनुहुन्छ, म त्यो जनताको भरोषा र आत्म बिश्वास लिएर चुनावी मैदानमा आउछु । अर्को कुरा पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनितिमा बर्तमान दुईतिहाई को सरकार भनि आफुलाई घमण्ड गर्ने सरकारका कुकृत्यहरु, भष्ट्राचार, अनियमितता, संवैधानिक नियुत्ति लगायत ति निकायमा भएको राजनैतिकरण कारण मुलुकलाई बिस्तारै
असफल राष्ट्र,असफल संघीयतामा लैजाने प्रयत्न भएको छ ।उनीहरुको नितीगत भ्रष्टाचार विभिन्न वहानामा लगाईएका कर एवं ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता माथिको दिन प्रतिदिन भएको हमला एवं अराजकताले जनता कम्युनिष्ट देखि दिक्क भएका छन् । यसको विकल्प भनेको केवल नेपाली काँग्रेस मात्र हो । यसैले अवको समयमा जनताका कुरा सुनुवाई हुन् केवल नेपाली काँग्रेसबाट
मात्र सम्भव भएका कारण पनि यस क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसको जित्ने आधार रहेको म देख्छु ।
भनिन्छ कांग्रेस जहिले पनि कांग्रेसका कारण नै हार्छ कसरी ब्यवस्थापन
मेले माथि भनी सके,म यस पटक मेरो उम्मेदवारी सगै यस्ता गुनासो आउन दिन्न । म अग्रज नेताहरुको सदभाव,आर्सिवाद,समकालिन नेताहरुको सहयोग अनि म भन्दा पछिल्ला पुस्ताको भरोषाको केन्द्र बिन्दु बनेको छु ,मेरो उम्मेदवारीमा कोहि नेता तथा साथीहरुले गुनासो गर्नु हुन्न,किनकि मैले विगतमा पार्टीका हरेक कार्यमा गरेको ईमान्दारी सहयोगका कारण अग्रज नेता
हरुकै नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन टोली,अग्रज नेताहरुको नेतृत्वमा प्रचार प्रसार लगायत निर्वाचनलाई प्राबिधिक रुपमा अगाडि बढाउन बिषय बिज्ञहरु समेतलाई साथ लिने छु । अव पनि काँग्रेसका नेताहरु आपसमा जुधेर निर्वाचन बस्नु हुन्छ,भन्ने मलाई लाग्दैन । म सदैव सकारात्मक सोचले हिडेको कारण मलाई कोही कसैले गुनासो गर्नुहोला,असहयोग गर्नुहोला भन्ने कल्पना नै गर्न
सक्दीन । मलाई सवैले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ ,ती नेताहरुको सहयोग र सदभावबाट अघि बढेको कारण मलाई सवै नेता तथा साथीहरुले सहयोग गर्ने कुरामा म ढुक्क छु ।
काँग्रेस भित्रको अन्तरद्दोन्दलाई कसरी मिलाउनु हुने छ ?
एउटा जिवन्त पार्टीमा आन्तरिक द्धन्द्ध हुन्छ,तर त्यो द्धन्द्ध पार्टी भित्रै हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता सदैव राख्ने गर्दछु । म २०५४ साल देखि भएका सवै तह तहो निर्वाचमा कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा रही निर्वाचनलाई हेरेको छु,भोगेको छु ,गएको नगर निर्वाचन र प्रदेशमा मेरो दावा हुदा हुदै पनि पार्टीले तय गरेका साथीहरुको पक्षमा सदैव लागे,कोही कसैले गुनासो गर्ने ठाउ राखिन,अव म उम्मेदवार हुदा ती साथीहरुले मलाई पनि ईमान्दार सहयोग गर्नुहुने बिश्वास मा छु । यो चोटी ढुक्क हुनुहोस,काँग्रेसका कारण काँग्रेस चुनाव हादैन । भक्तपुरमा अव कुनै अन्र्तद्धन्द्ध,आन्तरिक बिबाद छैन । म पार्टीको पदाधिकारी पनि भएका कारण भएका समस्या र बिबादको ब्यबस्थापन हामीले गरि सकेका छौं ।
तपाईंले नै उम्मेदवारी पाउनु भएका खण्डमा के के गर्नुहुने छ ?
मैले नै उम्मेदवारी पाउने कुरामा म बिश्वस्त छु ।तसर्थ निर्वाचन परिचालन, निर्वाचनको ब्यबस्थापनमा म लागिसके । निर्वाचन पश्चात म जित्छु भन्ने मलाई पूर्ण बिश्वास छ । आम मतदाताले गर्नु भएको भरोषा ,बिश्वास लाई कुनै पनि अर्थमा गुम्न दिन्न । यो प्रदेशको एउटा खाका कोरेको छु,बिकासको
आधार बनाएको छु,मेरो उम्मेदारी सगै यो सवै सार्वजनिक गर्ने छु ।
प्रदेश राजधानी र प्रदेशका विभिन्न बन्न बाँकी कानूनका विषयमा हाल सम्म
अन्योलता रहेको छ यसका सम्वन्धमा कस्ता कदम हजुरको हुने छ ?
यो सरकार,केन्द्र होस वा प्रदेश अन्य कुरामा आफुलाई दुई तिहाई भनि घमण्ड गर्ने तर गर्नु पर्ने न्यूनतम कुरामा चासो नदिने कार्य देख्दा मलाइ अचम्म लागेको छ । भक्तपुर जिल्लालाई प्रदेशको राजधानि बनाउनु पर्दछ भनि नेपाली काग्रेस भक्तपुरले औपचारिक रुपमा माग गरेको छ,यो प्रदेश सरकार आफ्नै पार्टीको अन्तरद्धन्द्धका कारण प्रदेशको राजधानी तोक्न सकेको छैन । सवै जिल्ला
का साथीहरुलाई हिजो प्रदेशको राजधानी दिन्छौं भनेर ढाटेर मत मागेको छ, तर सवै जिल्लामा राजधानी हुदैन, राजधानीको निर्णय सगै पार्टीगत समस्या आउने संभावना देखेर प्रदेशको राजधानी तोक्न अलमलमा परेको छ । तसर्थ प्रदेशको राजधानी भक्तपुर बनाउन नेपाली काँग्रेस भक्तपुरको प्रतिनिधका हैसियतले सदैव लाग्ने छु । जहासम्म प्रदेश कानूनको कुरा हो मेरो बिषय पनि भएका कारण बाट पनि म अझ बढी लाग्ने छु भने यो मेरो दायित्व पनि हो । तर सरकार उनीहरुको भएकाले भक्तपुरको एउटा काँग्रेसले गर्दैमा केही हुदैन तर मेरो सदैव सकारात्मक प्रयास हुने छ ।
प्रदेश क्षेत्रको विकासका कस्ता सम्भाब्यता देख्नु भएको छ ?
हामी भाग्यमानी भक्तपुर बासी हौं, बिकासका अनगिन्ती संभावना छ,पर्यटकीय नगरी नगरकोट, कृषिको संभावना बोकेको मनोहरा फाँट,भौगोलिक रुपमा देशको राजधानी सगै रहेको कारण हामीले योजना बनाउदा सकारात्मक रुपमा अघि बढेमा भक्तपुरको मुहार फेर्न सक्छौं । बाहीरी चक्रपथ,पहाडि लोकमार्ग लाई हाम्रो पदेशले आत्म साथ गर्दै अघि बढ्ने छौं ।
यो उप निर्वाचन भक्तपुर बासीको लागि अत्यन्तै महत्व रहेको छ । गाउ, नगर,प्रदेश र केन्द्रमा आफ्नो बहुमतको घमण्डले सरकार र तिनिसग आवद्ध साथीहरुको अभिमानले गर्दा आममतदाता आंक्रान्त भएका छन,गएको निर्वाचन मा हामीले हालेको मतको सही सदुपयोग हुन सकेन सवैको बिकल्प नेपाली काँग्रेस हो भन्ने आम मतदाताको भनाई रहेकोले नेपाली काँग्रेसले जित्ने आधारहरु छन । तपाईहरु जस्ता बौद्धक बर्ग,आम भक्तपुर बासीको चाहना पुरा गर्न सदैव तयार रहेको कारण निर्वाचनमा हाम्रो बिजय सुनिश्चित छ । मलाई आफ्नो र नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट बिचार राख्ने समय दिनु भएकोमा तपाई लगायत संवाहक परिवारलाई हार्दिक धन्यबाद ।
बिजयादशमी,शुभ दिपावली,छठ नेपाल संवत लगायतका पर्वहरुको हार्दिक मंगल मय शुभकामना
Previous articleअपार्टमेन्ट नै लिएर नेपाली याैन बजारमा रसियन केटिहरु
Next articleभोजन गर्दा कुनदिशातर्फ फर्केर भोजन गर्दा के हुन्छ ?